Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Nanokatra hotely fahenina tao Dubai i Rove
Rove Hotels, marika hôtely afovoany ankehitriny, no nanokatra ny hotely fahenina tao Dubai - Rove At The Park - ao amin'ny Dubai Parks and Resorts, ny zaridaina lohahevitra lehibe tafiditra ao amin'ilay faritra. Amin'ny alàlan'ny fanolorana fanokafana, ny vahiny dia afaka mijanona ao amin'ny Rove At The Park amin'ny AED 199 isak'alina fotsiny miaraka amin'ny fanentanana tapakila roa mankany amin'ny Dubai Parks and Resorts.
Rove At The Park dia manana efitrano 579 milamina sy efi-trano mifampitohy. Ireo vahiny ao amin'ny Parks and Resorts any Dubai dia afaka mahazo fitsangatsanganana an-tsehatra mahafinaritra sy adrenalinina mihoatra ny 100 sy ireo manintona miely manerana ny MOTIONGATE ™ Dubai, PAROL BOLLYWOOD Dubai, LEGOLAND® Dubai ary LEGOLAND® Water Park ary koa fidirana maimaim-poana amin'ireo faritra misy temotra ao amin'ny Riverland ™ Dubai.
Paul Bridger, Talen'ny Corporate Operations, Rove Hotels, dia nilaza hoe: "Tian'ny vahiny ny Hotely Rove noho ny toerana misy azy ireo, ny kojakoja ilaina, ny fahafaham-po ary ny sandany azo antoka, izay nahatonga ny marika ho iray amin'ireo malaza indrindra eto an-tanàna. Faly izahay manokatra ny Rove At The Park izay manome fialantsasatra mahafinaritra ho an'ny Rovers. ”
“Dubai Parks and Resorts dia toerana fialamboly mampihetsi-po izay mahasarika ny fianakaviana, ny mpivady ary ny mpankafy ny lohahevitra. Ny fanokafana trano fandraisam-bahiny faharoa dia ao anatin'ny paikadinay mba hanana fanalahidy maherin'ny 1,300 ho tonga any amin'ny tapany faharoa amin'ny 2020, Ahmed AlRayyes, Lehiben'ny varotra sy fandraisam-bahiny, DXB Entertainments, ilay orinasa tompona Dubai Parks and Resorts.
Rove At The Park dia antsasak'adiny fotsiny ny fiara Dubai Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena sy seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Al Maktoum. Afaka miditra mora foana amin'ny toeram-pivarotana sy fialamboly maro ny vahiny ary koa ny tranokala Expo 2020 Dubai.
Ny efitrano rehetra dia natao hampifaliana ny vahiny amin'ny efijery fahitalavitra 48 mirefy misy hub misy haino aman-jery hendry sy wi-fi maimaimpoana. Ny kidoro dia misy kidoro mpamorona, fandriana hialana ho an'ny vahiny fanampiny ary fandroana moderina misy fandroana orana mahery. Manolotra serivisy manan-tsaina toy ny faran'ny tara-maso amin'ny hotely ny trano fandraisam-bahiny 2pm, Gym 24 ora, dobo filomanosana ary haingon-trano. Ny trano fandraisam-bahiny dia manana magazay fivarotana bizina 24 ora, trano fanasan-tena ary efitrano fivarotana entana. Ny The Daily dia toeram-pitsangantsanganana tontolo andro izay ahafahan'ny vahiny misakafo na mandray ary mandeha.
Misy trano fandraisam-bahiny dimy hafa eo ambanin'ny marika ao Dubai anisan'izany i Rove Downtown, Rove City Center, Rove Healthcare City, Rove Trade Center ary Rove Dubai Marina.